Tag: doro anya
Injin nyocha nke mkparịta ụka Gong na-enyocha oku ahịa na ọkwa mmadụ na mkpokọta iji nyere gị aka ịghọta ihe na-arụ ọrụ (yana ihe na-adịghị). Gong malitere site na ijikọta kalịnda dị mfe ebe ọ na-enyocha kalenda ahịa ọ bụla 'kalenda na-achọ nzukọ ahịa na-abịanụ, oku, ma ọ bụ ngosi iji dekọọ. Gong sonyeere oku ọ bụla akpọrọ dị ka onye bịara nzukọ nzuko wee dekọọ nnọkọ ahụ. Edere ma ọdịyo na vidiyo (dị ka mbido ihuenyo, ihe ngosi, na ngosi)
Fraịde, Machị 27, 2015 Douglas Karr
Dabere na nyocha nke Forrester mere, pasent 62 nke ndị isi ahịa chọrọ ka enyokwuo anya na ọrụ ire ahịa, mana naanị pasent 6 nwere ntụkwasị obi na ha na-enweta nghọta ziri ezi. N'ihi ya, ndị isi ahịa na-agbasi mbọ ike ịghọta ihe ndị na-emegharị, otu, na ọdịnaya dị irè n'ezie na usoro ahịa ahụ - ọbụlagodi ruo mgbe e meriri ohere ma ọ bụ furu efu. ClearSlide, ihe ngosi ngosi nke enyere ire ere, eweputara aka na Soro, ihe ohuru nke na enyere ndi ahia aka ileba anya, nyocha, na